Creative Writing » စဉ်းစားကြည့်ပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်	24
Posted by Alincho on May 14, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 24 comments
.ကျေးငှက်ကလေးများရဲ့ ကျီကျီကျာကျာ အော်မြည်သံအောက်မှာ မင်္ဂလာရှိသော နေ့သစ်တစ်ရက်ကို အိပ်ရေးမ၀စွာ နိုးထလာခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ .ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပါတ်ပိတ်ရက်ကိုတော့ အိမ်မှာ ကောင်းကောင်း အနားယူအိပ်စက်ဖို့ စိတ်ကူးထားသည်။ သို့သော် တထစ်ချ .ကား ပြော၍မရသေးပါ။ တစ်ပါတ်ခုနစ်ရက်၊ တစ်ရက်နှစ်ဆယ့်လေးနာရီဆိုတာ အလင်းချိုအတွက်တော့ သိပ်မလောက်ချင်။ .အလုပ်ကတစ်ပါတ်ကို ခြောက်ရက်ဆင်းရပြီး ကျန်တစ်ရက်မှာ တစ်ပါတ်စာအိမ်အလုပ်တွေနှင့် ပရဟိတအလုပ်တွေကို .အပြေးအလွှားလုပ်ရသည်။ အလုပ်ပိတ်ရက်ကို အိမ်မကပ်ရသည်မှာ ဘယ် နှစ်ပါတ်မှန်းပင် မမှတ်မိတော့။ စိတ်ကူးလေးမှ .မဆုံးချင်သေး မေမေက ဒီတစ်ပါတ်ကို နိုင်ငံခြားမှ အလည်လာသော မေမေ့တူလေးကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးရင်း သားသမီးတွေ .အားလုံးနဲ့ပါဆုံရအောင် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောလာသောကြောင့် လေထဲဆောက်ထားသော တိုက်အိမ်လေးမှာ လေထဲတွင် .ပင် ပျောက်ကွယ်သွားရရှာလေပြီ။
.အလင်းချိုတို့ မိသားစုမှာ မောင်နှမငါးယောက်ရှိပြီး အလင်းချိုကအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကြီး လေးယောက်မှာ အိမ်ထောင်သည် .များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အလင်းချိုတွင် တူ၊တူမများ များစွာရှိ သည်။ ထိုကလေးလေးများမှာ မျောက်နှင့်မှားလောက်အောင်ပင် .အလွန်အဆော့သန်ကြ၏။ ယောက်မ နှင့်မှားလောက်အောင်ပင် အလွန်အမွှေတော်ကြ၏။ မြန်မာပြည်မှမက်ကဲနစ်များလိုပင် အလွန် .အဖျက်ဆီးတော်ကြ၏။ အပြင်သွားနေတုန်း အဲဒီကောင်လေးတွေလာသွားလျှင် အိမ်ထဲဝင်လိုက် သည်နှင့် မပြောဘဲသိနိုင်၏။
.မောပန်းနွမ်းနယ်ကာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျစွာဖြင့် တံခါးလာဖွင့်ပေးသော အမေ့မျက်နှာ၊ အလှ ကျောက်ပြားများပေါ်ပေကျံနေသော .အကွက်များနှင့် ခြေရာသေးသေးလေးများ၊ အလင်းချိုရဲ့ သူပုန် ၀င်မွှေသွားသလားထင်ရလောက်အောင် မွစာကြဲရှုပ်ပွနေသော .အခန်းလေးစသည်တို့သည် ဒင်း ကလေးတို့ နယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော အမှတ်အသားသက်သေများပင် ဖြစ်ကြသည်။ .ယခုလည်း ပိတ်ရက်တွင်တ၀ကြီးအိပ်လိုက်မည်ဟု လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ထားသမျှ ဒင်းလေးတွေ လာမည်ဆိုသော .အသံကြားသည်နှင့် အနုမြူဗုံးကြဲလိုက်သလိုတစ်စစီ လွင့်ပြေးကုန်ရသည်။ ဤမျှ လောက်ထိ စွမ်းကြပါပေ၏။
.သို့သော် ထိုတူ၊ တူမတော်များသည် အကြီးဆုံး ၁၉-နှစ်မှ အငယ်ဆုံး ၃-နှစ်လေးအထိ ဤ အဒေါ်၏လက်မှ တစ်ယောက်မျှမလွတ်ခဲ့ချေ။ .အလင်းချိုက အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်ပြန် အထက်က အစ်ကို၊ အစ်မများနှင့် အသက်ကလည်းကွာပြန်တာကြောင့် အလင်းချို .၇-တန်းနှစ်လောက်မှာပင် အကြီးဆုံးအစ်ကိုက ပထမကလေးရနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုတူမဦးလေးမှစ၍ အလင်းချို၏ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် .(မုန့်၊ကစားစရာ၊အကျီင်္စသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ)နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ (အငယ်ဆုံး ဆိုသော ဆိုးနွဲ့ပိုင်ခွင့်များ)ကိုဝေမျှပြီး ကလေးက .ကလေးပြန်ထိန်းရင်းတစ်မျိုး၊ ကလေးများနှင့် ကလေး လိုဆော့ရင်းတစ်ဖုံ ထိန်းကျောင်းလာရခြင်းဖြစ်သည်။
.ကလေးများနှင့် ကလေးမိဘများသာ ပြောင်းလဲသွားသည်၊ ဒီအဒေါ်ကတော့ ပြောင်းလဲမသွား။ အသစ်အသစ်သော .တူ၊တူမလေးတွေရတိုင်း အသစ်အသစ်သော အချစ်လေးများဖြင့် ချစ်ဆဲသာ ဖြစ်သည်။ အခြားချစ်စရာကလည်းမရှိလေတော့ .ဒင်းလေးတို့ကိုပဲ အချစ်ပိုရသည်ပေါ့။ ဒင်းလေးတို့ ကလည်း လည်သည်။ အိမ်ရောက်ပြီဆိုတာနှင့် သူတို့၏အဖေ၊ အမေများကို .လှည့်မကြည့်ကြတော့၊ ငယ်ငယ်၊ ငယ်ငယ်နှင့် အလင်းချိုနားသာကပ်ကြသည်။ ကပ်မှာပေါ့ – သူတို့ကို စိတ်ရှည်တာကလည်း .အလင်းချိုပဲရှိတာကိုး။ သြော် သူတို့မိဘတွေကတော့ သားရေး၊ သမီးရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေ နဲ့ဆိုတော့ လူလွတ်ဖြစ်တဲ့ .အလင်းချိုလောက် ဘယ်စိတ်ရှည်ပါ့မလဲနော်၊ ဒီလိုပဲဖြေပါတယ်။ ကစား ချင်တယ်ဆိုလည်း (မကြီးမငယ်နဲ့) အတူကစားပေး၊ သူတို့ .စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မေးသမျှကိုလည်း စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် ရှင်းပြပေး၊ ထမင်းမစားရင်လည်း .လက်မှာထမင်းများ ခြောက်ကပ်နေအောင် ချော့ကျွေးပေး၊ ချီသိပ်မှအိပ်မယ်ဆိုလည်း ဒီအဒေါ်အပျိုလေးပိန်သေးသေးကပဲ ဒင်းတို့ရဲ့ .၀၀ကစ်ကစ် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကို လက်တွေထုံကျင်နေအောင် ချီသိပ်ပေးတာမဟုတ်လား။ ဒင်းတို့သောင်းကျန်း သမျှ သည်းခံပြီး ဆူခဲ၊ .ရိုက်ခဲတော့ ဒီအဒေါ်ကိုပဲ ကပ်ကြတာတော့ မဆန်းချေ။ ကလေးဆိုတာက လက်သာရာနေမည်ပေါ့။ ခက်သည်က အလင်းချို…
.အရွယ်ကလေးရောက်လာလျှင် ကလေးတွေက ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ သဘာဝအတိုင်း စိတ် ကစား၍ ရည်းစားထားချင်လာ၊ မိဘများနှင့် .ဂျစ်ကန်ကန် ဖြစ်လာတတ်ကြတော့သည်။ ဤသည်ကို မိဘများကရော အဖိုးအဖွားများကပါ ဒင်းလေးတို့ကို .နားဝင်အောင် ချော့မော့ပြောပေးဖို့ တာဝန်ကို အလင်းချိုအား တညီတညွတ်တည်း ပေးအပ်လာကြသည်။ အဲဒီမှာ စတွေ့တာပါပဲ။
.စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ကိုယ့်တူလေး၊ တူမလေးတွေမို့ ချစ်မိတာအပြစ်လား၊ သူတို့မိဘတွေ စိတ်မရှည်လို့ ကိုယ်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ .သူတို့သိချင်တာလေးတွေ ရှင်းပြပေးတာ အပြစ်လား၊ ကလေးတွေ ချစ်အောင်နေမိတာ အပြစ်လားလို့။ အလင်းချိုလေးခမျာမှာ .ကိုယ့်တူလေး၊ တူမလေးတွေမို့ ချစ်လွန်းလို့ အနစ်နာခံ၊ သည်းညည်းခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်အရွယ်၊ ရည်းစားထားဖို့ .အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်အဆုံးရှုံးခံပြီး အပျိုကြီးအဖြစ်ခံကာ ဒင်းလေးတွေကို ထိန်းကျောင်းပြုစုလာတဲ့ ဟာကို .ဒီလိုစကားမျိုး ပြောစရာလားလို့။
.ဒါကို မဆိုင်တဲ့အပေါက် ဂလိုင်နဲ့ခေါက်ပြီး ကိုယ့်ကလေးကိုယ်မနိုင်တာနဲ့ ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရှိတဲ့ ဒီအဒေါ်အပျိုကြီးကိုမှ .လာဆုံးမခိုင်းရတယ်လို့ ဒါသက်သက် အပျိုကြီးကို သိက္ခာချတာ၊ နှိမ်တာမဟုတ်လို့ ဘာလဲ။ နောက်ပြီး ဆုံးမခိုင်းတဲ့ .အကြောင်းအရာကိုလည်း ကြည့်ဦး၊ ကလေးတွေ စိတ်မကစားအောင်၊ ရည်းစားမထားအောင်တဲ့။ အခုဘ၀မှာတောင် .အပျိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာကို လုပ်ပုံ ကကြည့်ကြဦး။ ဒါတောင် ကလေးတွေက သူ့စကားဆို နားထောင်တတ်လို့ ဆုံးမခိုင်းတာ စိတ်ဆိုး .စရာလားတဲ့- အလင်းချိုဘက်က မစဉ်းစားပေးပုံများ ပြောပါတယ်။ မသိရင်တမင်များ လာစနေသလား ထင်ရတယ်။ အဲဒါကို အလင်းချိုက .စိတ်မဆိုးသင့်ဘူးလားလို့၊ စိတ်ဆိုးမိတာ အလင်းချိုအလွန် လားဆိုတာ လေးစားရသော ရွာသူ ရွာသားများကတွေပဲ .စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့နော်။
ခင်ဇော် says: အပျိုကြီးက အပျိုကြီးပေမို့ အပျိုကြီးဆီမှာ အပျိုကြီးဖြစ်နည်း သင်ပေးနိုင်အောင် အပ်တာပဲ ဟာပဲ ဟာပဲ ကို…..
Alinsett @ Maung Thura says: အမှန်တော့…လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသာ…. သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်… မျှကြည့်တတ်တဲ့
နှလုံးသားနဲ့ ဥာဏ်ပညာ ရှိခဲ့ရင်….
ဘယ်လောက် နေပျော်စရာ ကောင်းလိုက်မယ့် လောကလဲ…
uncle gyi says: သီးချိန်တန်သီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်
padonmar says: ကြည့်စမ်း၊တီဒုံ့ကိုများ ကြည့်ရေးသလားလို့။
ဒါပေမယ့် ဒို့ အကိုအမတွေကတော့ သူတို့ သားသမီးကို ဒို့လက်ထဲ မအပ်ဘူး။
ဒို့လို အပျိုကြီး ဖြစ်မှာ စိုးလို့တဲ့။
အောင် မိုးသူ says: အပျိုကြီး လူပျိုကြီးများရဲ့ ဒုက္ခ
Mike says: .ချစ်စရာတူ၊တူမလေးတွေရှိတာကိုက ဘ၀မှာပျော်စရာပါလေ
Ma Ei says: ဟိုလေ…
တီအိ သမီးလေး နဲနဲကြီးလာရင်
ချိုလေး တူ တူမတွေနဲ့ အတူ ဆုံးမပေးဘို့
အပ်ချင်လို့ အဲ့ဒါလေး …
မြစပဲရိုး says: ဖတ်ရတာ ချစ်ဖို့ကောင်း လိုက်တာ။
အကောင်း ဆုံး ကတော့ ချို ကလေး ရေ
Revenge ….. :-))))
​ဒေါ် လေး says: ​အလင်းချို​ရေ က​လေး​တွေက သူတိုချစ်​ခင်​​လေးစားတဲ့လူရဲ့စကားဆို
မိဘ​တွေက​တော့ အတ္တကြီးတဲ့လူ​တွေ​ပေါ့( ကိုယ်​အပါဝင်​)
အ​ကောင်းဆုံး​တွေဘဲ ဖြစ်​ခြင်​ကြတယ်​ ​
Alincho says: .တီခင်ဇော်ရေ ၀ဋ်လိုက်မှာဆိုးလို့ မသင်ပေးပါရစေနဲ့လို့။
.ကိုကြီးလင်းရေ အဲလိုသာဆိုရင်တော့ လောကနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့။
.အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးပဲလုပ်ရမယ်လို့ မချုပ်ချယ်ဘဲ .ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလဲဆိုတာကိုတော့ ပြောပြပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် .အန်ကယ်ကြီးနဲ့ ဒေါ်လေးရေ။
.တီဒုံရေ အပျိုကြီးလက်ထဲအပ်တိုင်း အပျိုကြီး ဖြစ်တာကျလို့နော်။
.ဦးမိုက်၏အားပေးစကားကြောင့် ယနေ့မှ၍ အားကုန်ကြိုးစားပါတော့မည်။
.တီအိရေ ရှေ့နေငှားမှထောင်လုံးလုံးကျမယ့် ကိန်းပါလားနော်။
Ma Ma says: အော်မေ့ဂိုဏ်းမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
Alincho says: ဂိုဏ်းသူအသစ်​တိုးပြီလို့သာမှတ်​လိုက်​ပါအန်​တီမမ
kai says: အပျိုကြီးတွေတိုးမယ့်သဘောကြားရသိရတိုင်း… ဗမာလူပျိုယောက်ျားတွေအသုံးမကျပုံ… တွေးမိ..။
ခုလည်း.. လူဦးရေမှာ.. မ,ကများ..
Alincho says: တိန်! တိုင်းပြည်အတွက် ယောင်္ကျားယူရမလိုလို…:-p
သူကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်။ စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ ရုပ်လှတာတစ်ခုတည်းနဲ့ကြိုက်လို့မရတော့၊ အထင်ကြီးလေးစားပြီး အိမ်ဦးနတ်နေရာ ပေးရလောက်တဲ့ လူကလည်းရှာမှရှား ဒါနဲ့ပဲ…
Alincho says: အမ်! စေ့စေ့တွေးမှ ရေးရေးပေါ်လာတယ်။ သူဂျီးပြောတာမမှန်ပါဘူးဗျို့။ ရန်ကုန်မှာ မိုးရွာနေတယ်သူဂျီးရေ၊ စက်ကွင်းမလွတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ :-p:-p
ကျော်စွာခေါင် says: အလင်းချိုရေ…
ဒီလိုဆိုတော့ဖြင့် တူ၊တူမတွေကို သင်တန်းချိန် ၂ ချိန်ခွဲပြီးပေးရမယ် ထင်ပါရဲ့ ..။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရည်းစားထား အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အထိ ပူလောင်ပြီး ဘဝမှာ ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်း..နဲ့ .
အပျိုကြီးဘဝနဲ့ နေရတာ…. ဘယ်လောက်အထိ ပူလောင်ပြီး ဘဝမှာ ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်း.။
ဦးကြောင်ကြီး says: စဉ်းဆားကျိ မြင်းနွားသိ ရင်းထားမိ ကျင်းနားထိ
Mr. MarGa says: ဂလိုဗျ
အ​ဒေါ်​လို အပျိုကြီးလုပ်​ရင် ပိုကောင်းမယ်​လို့ တွေးမိကြတယ် ထင်ပါရဲ့
အဲ့ဒါကြောင့် အပျိုကြီးတရား ဟောခိုင်းလားမှ မသိတာဗျာ
ဒီက​လေးတွေက ရှေ့မှာ ဥပမာတွေမြင်နေ​တော့ အဲ့သည်​တရားကို တိုးမယ်​မထင် နောက်​တာ အတည် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: တကယ်က အချစ်မရှိပဲနေရတဲ့ ဘ၀က .. သစ်ခြောက်ပင်ကြီးလိုပဲ..ငရဲဗျ …မစိမ်းလန်းဘူး…အဟိဟိ အကြင်နာတွေ ပန်းခင်းကြီးအဖြစ်ဖူးပွင့်ဖို့ …ရေခံမြေခံလိုသဗျ…. ဆိုင်သလားမဆိုင်လားတော့မသိ ..
ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းက အချစ်တွေနဲ့ထိန်းကျောင်းထားတာခင်ဗျ…. ဆိုတော့ကာ..ရည်းစားထားပလိုက်စမ်းပါဗျာ…ရွာထဲမှာ လူကောင်းသူကောင်းလေးတွေက ပေါကပေါနဲ့ …မှတ်ချက်.. တဂျားမပါ… အဲ့ကောင်လေး အလွန်ဇီဇာကြောင် အဟိဟိဟိ
Ma Ma says: …မှတ်ချက်.. တဂျားမပါ… တဲ့။
ကြည့်စမ်း လိမ္မာလို့ သိကြားမင်းတောင်ဖြစ်နေတဲ့သူကို အခမဲ့ကြော်ငြာပေးလိုက်တာက Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
Alincho says: ကြည့်စမ်း လိမ္မာနေတဲ့ကလေးကို ၀ိုင်းပြီး ဆေးထိုးနေကြတယ် ဟွင်င်င်း :-)))
nozomi says: အမည် … အလင်းချို
အသက် .. ၃၁ ( အကြီးဆုံး ၁၉-နှစ်မှ ……. အလင်းချို .၇-တန်းနှစ်လောက်မှာပင် အကြီးဆုံးအစ်ကိုက ပထမကလေးရနေပြီဖြစ်သည်)
အလုပ်အကိုင် …. လစာကောင်း (အလုပ်ကတစ်ပါတ်ကို ခြောက်ရက်ဆင်းရပြီး – လစာ ကောင်းလို့သာ တပတ် ၆ ရက် အလုပ်ကို လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည် )
စိတ်နေ စိတ်ထား – သဘောကောင်း ကလေးချစ်တတ် စိတ်ရှည် (သူတို့ကို စိတ်ရှည်တာကလည်း .အလင်းချိုပဲရှိတာကိုး )
ကိုယ်ခန္ဓာ – မော်ဒယ်ကဲ့သို့ ကိုယ်ခန္ဓာ ( ဒီအဒေါ်အပျိုလေးပိန်သေးသေးကပဲ )
ထူးခြားသည့် အရည်အချင်း – စာအရေးအသားကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသေးစိတ် မြင်တတ်
ကဲ အရည်အချင်း ရှိသူ ရွာသား လူပျို လတ် များ ခင်ဗျာ အရာရာ ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အသက် လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ စိတ်ရှည်သည်းခံ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ စိတ် ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ ရွာသူလေး တစ်ဦး ရှိပါတယ် တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် ……………………………………………………….
Alincho says: အိုက်​စ်​ ​သေပြီဆြာ
ခုကFreeချို​တော့​၊ ဘာရယ်​ညာရယ်​မဟုတ်​ဘူးလူရှိန်​တာ​ပေါ့၊ အထင်​ကြီးခံရနည်း
တောင်ပေါ်သား says: ဒီရွာထဲမှာ နာမည်ကြီးမြားနတ်မောင်တစ်ယောက်ရှိသတဲ့ အလင်းချိုရေ
အမယ် အဲဒီအောင်သွယ်တော်က သူ့ကိုယ်သူအတွက်လည်း စွမ်းသဟ ၊
ဒီတော့ ရှာဖွေစုံစမ်း ဆက်သွယ်လိုက်ပါလေ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.